Mashandisiro ekushandisa iyo Safari tebhu boka mune macOS Monterey | Ndinobva mac
Kana iwe uri mune beta vhezheni ye macOS Monterey, kana iwe wakakokwa kuAppleSeed kana kana wakambove kutevera iyo blog nhau, iwe unoziva kuti Safari iri kuchinja. Mifungo inosiyana pane iyo nyowani dhizaini dhizaini, asi vanhu vakati wandei havadi kuti Apple yanga ichichinja iyo Safari browser nekukurumidza. Nekudaro, ibasa riripo uye isu tinofanirwa kudzidza kuishandisa.
Iyi nyowani tebhu Mapoka basa rinotibvumidza isu vhura mawebhusaiti ese atinoda kune rimwe basa, uye ipapo ipapo chinja kune ese akasiyana masosi iwe aunoda chimwe chinhu. Isu tinogona kuve neboka rematepi anonzi Basa iro rine ako ese ehofisi intranet saiti, yako kambani yepamutemo mapeji, uye pamwe nebasa rekutsvaga saiti.
Iwo mapoka epa tebhu ari padivi repadivi Mabhukumaki muSafari, ayo anovhurwa uye akavharwa nekudzvanya bhukumaki icon kumusoro kwekuruboshwe. Iyo icon inewo museve mudiki kurudyi, zvichiratidza kuti pane inodonhedza menyu. Kana isu tikabaya pane iyo icon uye nekuvhura maBhukumaki eparutivi, mapoka acho anoratidzwa mune chinyorwa. Uye isu tinowana zvakare bhatani idzva rekugadzira boka idzva. Pedyo nechiratidzo chemabhukumaki, zita reboka razvino rebhu richaonekwa uye tinogona kudzvanya pairi kuti tikurumidze kuchinja pakati pemapoka akasiyana.
Maitiro ekumisikidza tab tab muSafari kubva kutanga
MuSafari, tinodzvanya padiki museve wekudonhedza padhuze neBhukumaki icon. Isu tinosarudza boka idzva risina chinhu rematebhu uye tinonyora zita reboka rayo idzva. Isu tinoenda kune webhusaiti yatinoda uye tinogona kushanduka pakati pemapoka akasiyana ematebhu, tinya pazita mune runyorwa kana tinya pane inodonhedza menyu padyo nezita reboka uye icon mune mabhukumaki epashure.
Zvino, kana isu tafamba tichienda kune saiti, saiti iyoyo ichave iri muboka idzva rebhu. Kana isu tikazarura imwe tebhu uye tichienda kune imwe nzvimbo, tichava tawedzera yechipiri saiti kune iro boka. Kufanana neizvi tichienderera kusvikira tavhara. Ndosaka zvakakosha kuti tizive izvozvo patinozviitira kekutanga, isu tinofanirwa kuronga iwo matabhu atinozoisa mumapoka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS Monterey » Mashandisiro ekushandisa iyo Tab's tab boka muMacOS Monterey
Jorge Arturo Echeverri Dávila akadaro
Mmmmm zvakanaka, ini ndanga ndichitarisira zvakawanda zvakawanda kubva pakanyorwa kwakadai.
Zvichida taura kana kana uchichinja boka rema tabo mafomu anoshanda akavharwa, kana kana ndiri kutarisa vhidhiyo mune tabo yeboka rematepi uye kana ndichichinja vhidhiyo inomira ... kana PIP inoshanda muhwindo reboka painenge iri mune rimwe boka….
Chinyorwa chakakosha kwazvo.
Pindura Jorge Arturo Echeverri Dávila